‘दोस्रो चरणको निर्वाचन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल’ - Medianp
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २४, २०७४११:००0
काठमाडौँ, २४ असार । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भर्खरै सम्पन्न भएको दुई चरणका स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सुधार ल्याइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवार पनि त्यतिकै सजग र सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन, मतदातामा देखिएको उत्साह, मतगणनामा भएको ढिलाइ, निर्वाचन आचारसंहिता पालनालगायत समसामयिक विषयमा प्रमुख आयुक्त यादवसँग नारायणप्रसाद न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
निर्वाचन आयोगले मात्रै निर्वाचन गराउने होइन, यसको लागि सरकारको सहयोग अति आवश्यक छ, सरकारबाट निर्वाचन आयोगले जुन खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो त्योभन्दा बढी नै सहयोग प्राप्त गरेका छौँ, माग गरेअनुरुपकै बजेट र जनशक्ति उपलब्ध भयो भने निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकारले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति सरकारबाट भएको हुनाले समग्रमा निर्वाचन उदाहरणीय र ऐतिहासिक रह्यो । निर्वाचनका लागि बनाइएको सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी रहेको हुनाले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सञ्चालनमा सरकारले ठूलो सहयोग गरेको छ, त्यो ज्यादै सराहनीय छ ।
वर्षायाममा निर्वाचन गराउनुपर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो ?
निर्वाचनका लागि आयोगलाई हर क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । आयोगलाई कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो त निश्चित रुपमा भएकै हो । वैशाख ३१ मा एकै चरणमा भए प्रकृतिको प्रतिकूलता व्यहोर्नु नपर्ला र सजिलोसँग राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने अनुमान गरेका थियौं, राजनीतिक वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा जेठ ३१, असार ९, १३ हुँदै १४ गतेका लागि सरेपछि ज्यादै अप्ठेरो परिस्थितिमा परेका थियौँ । मौसमको प्रतिकुलता पर्‍यो भने अप्ठेरो हुन्छ भन्ने थियो । त्यसपछि पनि राजनीतिक दलबीच निर्वाचनप्रति सहमति, असहमति निरन्तर चलिरह्यो । त्यस संवादबाट एउटा राम्रो सन्देश प्राप्त भयो र सबैको सहयोगबाट मिति सरेर पनि अत्यन्तै शान्तिपूर्ण र स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । वर्षायाम सुरु भएपछिको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुनु भनेको इतिहासकै ठूलो उपलब्धि हो, अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो भएकै थिएन ।
आचारसंहिताको पालनामा दलहरुको भूमिका र व्यवहारको कस्तो अनुभव गर्नुभयो रु
समाचारमाध्यमले निर्वाचनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरे, यसप्रति आयोगको धारणा के कस्तो रह्यो ?
करेन्ट लागेर २२ वर्षीय युवाको मृत्यु